Gaadhi Ay Saarnaayeen Qaar Kamid Ah Ciidamada Dowladda Oo Qarax Miino Lala Eegtay - jornalizem
Gaadhi Ay Saarnaayeen Qaar Kamid Ah Ciidamada Dowladda Oo Qarax Miino Lala Eegtay
Hal qof ayaa ku dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta wadada warshadaha lagula eegtay Gaadhi ay la socdeen Ciidamada Dowladda, iyadoo qaraxa kadib Ciidamada Dowladdu ay qab qabteen sodomeeyo qof oo ahaa dad rayid a, kuwaas oo ka ag dhowaa halka qaraxu ka dhacay.
Qaraxan ayaa ka dhacay nawaaxiga Warshadii Coca Cola oo hor marta Jidka Warshadaha, waxaana qaraxa uu waxyeelo u geystay gaadhi rakaab ahaa oo dad rayid ay saarnaayeen. Wararka ayaa sheegaya in qaar kamid ah dadka dhaawacmay ay haleeshay rasaas ay fureen Ciidamada Dowladda markii uu qaraxu dhacay kadib.
Goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxaasi aan wax khasaare kasoo gaadhin Ciidamada Dowladda, hase ahaatee dadka rayidka uu wax yeeleeyey.
Dadka ay qab qabteen Ciidamada Dowladdu ayaa la geeyey Warshadii Baastada oo fadhiisin u ah Ciidamada Dowladda, waxaana qaraxan uu saamayn ku yeeshay isu socodka wadada Warshadaha, gaar ahaan gaadiidkii ka shaqaynayey Suuqa Xoolaha iyo Suuqa Bakaaraha.